ဆွစ်ဇာလန်စူပါလိဂ် - Luzern vs ဘေဆယ် | ဘောလုံးခန့်မှန်း | လောင်းကစားအကြံပေးချက်များ
+7/ 9584-983-763iဎfo@ဒါကြောင့်cက ceRBeTSHoot ကို.coမီတာ
fixed တွင် MATCHES
Luzern vs ဘေဆယ်
ဆွစ်ဇာလန်စူပါလိဂ် – Luzern vs ဘေဆယ် , betting tips by BETTIPS4ALL-football predictions
ပွဲစဉ်ရက်စွဲ: 30 ဇူလိုင် 2017 | Posted: 30 ဇူလိုင် 04:01 2017 GMT +2| သိမှတ်ဖွယ်ကြည့်ရှုအားပေး 2707 ကြိမ်.
ဆွစ်ဇာလန်စူပါလိဂ် – Luzern vs ဘေဆယ် – ဘောလုံးခန့်မှန်း
ဆွစ်ဇာလန်စူပါလိဂ် – Luzern vs ဘေဆယ် , ဘောလုံးခန့်မှန်း-ဘေဆယ်, နောက်ဆုံးဆွစ်ဇာလန်စူပါလိဂ်၏ချန်ပီယံ 8 နှစ်ပေါင်း, ဒီပွဲစဉ်များအတွက် Luzern ကြိုဆိုကြသည်. သူတို့ကတစ်ဦးနှင့်အတူစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစတင် 2-0 လူငယ် Boys vs အရှုံး, များစွာကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ကြပေမည်ဖြစ်သော်လည်းတကယ့်အချိန်မှာအပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုအံ့သြပါဘူး, လူငယ် Boys စိတ်ထဲ၌ကြီးသောကြိုတင်ရာသီယူပြီး. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ယနေ့ချန်ပီယံလိဂ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပရိသတ်တွေ၏ရှေ့မှောက်၌သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအနိုင်ရရှိဖမ်းပြီးမှ၎င်း၏အချိန်. သူတို့ကအားကစားကလပ်အဖြစ်အဖွဲ့များ vs အောင်ပွဲနှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးကြိုတင်ရာသီခဲ့ကြ & အားကစားက CP.
သေချာဘောလုံးခန့်မှန်း | မှန်ကန်သောအလောင်းအစားအကြံပေးချက်များ | ဘောလုံးလောင်းကစားအကြံပေးချက်များ | အခမဲ့ဘောလုံးလောင်းကစားဟောကိန်းများ | မြင့်မားသောအလေးသာဘောလုံးခန့်မှန်း | လက်မှတ်ဘောလုံးခန့်မှန်း
Luzern တစ်ဦးအနိုင်ရရှိနဲ့စတင် 1-0 Juric ကနှောင်းပိုင်းတွင်ရည်မှန်းချက်ပြီးနောက် Lugano vs အိမ်မှာ. သူတို့ဟာသော်လည်းကြိုတင်ရာသီအတွက်အချို့သောဒုက္ခခဲ့ကြ, နှင့်0အဆိုပါ friendly အတွက်အောင်ပွဲနှင့်ဥရောပလိဂ်အရည်အချင်းများအတွက် Osijek vs ဆုံးရှုံး. အဆိုပါအဖွဲ့သည် 5th နောက်ဆုံးရာသီပြီးဆုံး, တစ်စံချိန်နှင့်အတူ 14-8-14.
* ဘေဆယ်ကနောက်ဆုံးအနိုင်ရပါပြီ4Luzern vs ပွဲ. ဤသည်ပွဲစဉ်အဆုံးသတ် 3-1 ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ.
* ဘေဆယ်အနိုင်ရပါပြီ 12 ပြီးခဲ့သည့်၏ 14 Luzern vs ပွဲ. တွင် 10 သူတို့၏အမျိုးအ, ဘေဆယ်သွင်းယူ3သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်.
ဘေဆယ်တစ်အိမ်မှာစံချိန်နှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်ရာသီပြီးဆုံး 13-5-0 နှင့်ရည်မှန်းချက်ခြားနားချက် 50-17. သူတို့ကတိုကဒီမှာကြီးမားအကြိုက်ဆုံးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်. ပရီးမီးယားလိဂ်၏ခေါင်းဆောင်များ, လူငယ်တို့ Boys, စနေနေ့ဟာသူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်အနိုင်ရဒီတော့ဒီမှာအနိုင်ရရှိသေချာဘို့ဘေဆယ်ဘို့အရေးကြီးပါတယ်. ဤနှစ်ခုအကြားလူတန်းစားကွာခြားချက်ဖြစ်သင့်, ဒါကြောင့်ကျနော်အခွင့်အလမ်းတွေကိုကအနည်းဆုံးနဲ့အနိုင်ရဘို့ကြီးတွေဖြစ်ကြသည်ထင်2Basel.Play များအတွက်ရည်မှန်းချက်များလုံခြုံပြီး smarck.Bettips4all သင် it.Stay ညှိရဲ့အကောင်းဆုံးပူဇော်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်အလောင်းအစားပါဘူး.
သုတေသန Bettingဘောလုံးရမှတ်များအခမဲ့ကစားနည်းလောင်းကစားကနေငွေရှာဖို့ဘယ်လိုအွန်လိုင်းလောင်းကစားဘီဘာအိုကမ်းလှမ်းမှုအထူးပွဲသေချာတာပေါ့အလောင်းအစားခန့်မှန်း site ကိုဦးဝင်းကစားနည်း
Shakhtar Donetsk vs Wolfsburg ( ကျော်လွန် 2.5 ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် & 1.90 )
CFR အ Cluj vs Gaz Metan Medias (2& 1.75 )
နယူးကာဆယ် vs ဆောက်သမ်တန် ( 1 & 1.72 )
Dynamo Dresden vs စိန့် Pauli ဝင်း (1 @ 2.00 )